Nawi Dam nih hin Hakhaahrawh te lai. – Myanmar Chin
July 29, 2020 Myanmar Chin Chin 0
Chin ramkulh, Hakha ah Nawi Dam saknak kong he pehtlai in duhlonak ca ka hun ṭial. Atu sak timh mi Dam nih mipi caah ṭha hnemnak zeihmanhachuahpi lo leng ah Hakha khua aa dawhnak vialte cuahrawh dih te lai.
Hakha khua ahaṭhang mi ka si i BEHS No. 1 (Hakha) ah taang5in taang6tiang ka kai. Keimah bantuk Hakha ṭhang hnakchia pawl caah cun Hakha Nawi tiva kam cu hmunhma sunglawi asi bantuk in ti ngahring dawinak le tlang hmun kan hrawn nak hmun asi. Cu lawng si lo in ṭhanchonnak min bunh in tonghtham sersiamnak inaluat mi hmun pakhat ti zong chim kho asi. Nawi nih cucu atu tiang ahahmun pi rih.
Tuah le ser timh mi Dam nih hin zeipipa ṭha hnemnak chuah pi kho lo in mahasining vial te cuahrawh dih te lai. Na theih bang in, Hakha cu ti thurhnawm hlonhnak ningcang hmanh ṭha ṭi inangei rih mi asi lo. Furpi caan ah Hakha i hmunthur vialte leaṭilṭlaw vialte cu Nawi tiva ah an luang dih tawn ṭheio. Ṭhal caan ah le tiva hiacar dih fawn.
Cu lawng si lo in, Dam saknak timh hnawh chan zong hiataktak he aa ralkah ngai. Dam sak ding tha pe tu pawl nih cun hi thawng in din ti pek kho asi lai, tha dam tein thaw i chuahnak hmun le pawng kam aa serh khawh lai ti asi. A cung lei chim cia bang khan Dam sak mi thawng in tidil cu thurhnawm heakhat lai,amah tein sersiam le ro ter aum kho ti lai lo. Cu leng ah hi Dam sak timh mi nih hin mi lo le dum tampiarawkral ter lai, hi lo le dum chuak pawl in chan khat hnu chan khat rak iapaw aa cawm tu mipi tampi an um, keimah ka rualchan ka ni/ ka nute lila zong cu chung ah an i tel ve.
Dam sak ding nam asi mi hrim nih hin thil dangdangathuh pheh mi ngeih dawh asi. Hi sak timh mi Dam he pehtlai in thil sining biatak tein hlathlainak tuah taktak mi aum rih lo. Cu leng ah aho nih dah mah kong hi biatak teinanam timi zong hi fiangfai in aum lo, Chin ramkulh cozah nih maw hi thil hianam asi lo le mi zeimawzat cozah heachung lei thil pehtlainakangei mi pawl nih dah! Nawi tiva pawng hmun hma pawl he pehtlai inaṭhat hnemnak pawl hi mipi caah si lo in mi zeimawzat ca lawng ahathli teinakal sual hnga maw ti hi ka phang ngaingai.
Cu asi caah, hi Nawi Dam saknak nih cun Hakha pawngkam hmunhma aa dawhnak pawlahrawktu men asi lai caah hi kong he pehtlai in ruat ṭhan ding in upatnak he kan nawl.
The push to create this dam is also shrouded in mystery. There has not been any serious feasibility study on the proposed dam. It’s also unclear who is pushing this proposal—the Chin State government orafew individuals with deep connections to government officials. I am worried that the Nawi Valley I knew will go toafew individuals without any public benefits.
Note: Siang L. Sang (Dallas, Texas ) nih Mirang ca inaṭial mi leh ṭhan mi asi. #Zalongtein ruahnak, hmuhning, comment le share khawh asi.
Nawi ဆည် တည်ဆောက်ခြင်းသည် ဟားခါးကို ပျက်စီးစေလိမ့်မည်။
ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးတွင် Nawi ဆည်တမံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း အဆိုပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စာရေးသားပေးပို့အပ်ပါသည်။ ဤဆည်တည်ဆောက်ရန် အဆိုပြုချက်သည် ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာမရှိပဲ ဟားခါးမြို့၏ သဘာဝအလှကို ပျက်စီးစေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်သည် ဟားခါးမြို့တွင် ကြီးပြင်းခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အခြေခံပညာ ပဉ္စမတန်းနှင့် ဆဋ္ဌမတန်းကိုလည်း အထက (၁) တွင် သင်ယူတတ်မြောက်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်နည်းတူ ဟားခါးရှိကလေးသူငယ်များအတွက်မူ ဤ Nawi မြစ်ဝှမ်းသည် ငါးဖမ်းထွက်ခြင်း၊ ဂဏန်းနှိုက်ခြင်း နှင့် တောင်တက်ခြင်းတို့ အတွက် ထူးမြတ်လှသော နေရာဖြစ်သည်။ ဟားခါးတွင်ရှိသော ထိုနေရာမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးခေါင်းစဉ်အောက်တွင် လုံးဝမတို့ထိရသေးသော သဘာဝဒေသလေးလည်းဖြစ်သည်။ Nawi အနေဖြင့် မူလသဘာဝအနေအထားအတိုင်း သူ၏တာဝန်များကို ကျေပွန်ဆဲဖြစ်သည်။
ဤဆည်တည်ဆောက်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်သည် အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေများအားလုံးကို အကျိုး တစ်စုံတစ်ရာမရှိပဲ ဖျက်ဆီးနိုင်သည်။ သမ္မတကြီးလည်းသိပြီးဖြစ်မှာပါ၊ ဟားခါးတွင် သင့်တော်ကောင်းမွန်သော ရေဆိုးစွန့်စနစ်မရှိပေ။ မိုးရာသီတွင် ဟားခါး၏ အမှိုက်ဟူသမျှ အညစ်အကြေး ဟူသမျှ Nawi မြစ်အတွင်းသို့ စီးဝင်သည်။ နွေရာသီတွင် ယင်းမြစ်သည် ရေခမ်းခြောက်လေ့ရှိသည်။
ထို့အပြင် ဆည်တည်ဆောက်မည့် စီမံကိန်းအဆိုပြုချက်မှာ လက်တွေ့မကျပေ။ ဆည်တည်ဆောက် ရန်ထောက်ခံသူများက ဤဆည်တည်ဆောက်မည်ဆိုပါက သောက်သုံးရေရမည်၊ အပန်းဖြေနေရာ ဖြစ်လာမည်ဟု ပြောကြဆိုကြသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားပြီးသကဲ့သို့ ယင်းအဆိုပြု ဆည်တမံ ကြောင့် ဆည်ရေများမှာ အညစ်အကြေးများဖြင့် ပြည့်နှက်ကာ ခမ်းခြောက်ချိန် ရှိတော့မည် မဟုတ် ချေ။ ဒါတင်မကသေးပါ ဤအဆိုပြုစီမံကိန်းကြောင့် အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လယ်ယာစိုက်ခင်း အများအပြား ပျက်စီးသွားမည် ဖြစ်ကာ ယင်းလယ်ယာမြေလုပ်ငန်းကို ဆွေစဉ်မျိုးဆက် အမှီသဟဲပြုကြသည့် မိမိ၏ ဆွေမျိုးသားချင်း အဒေါ်တို့မိသားစုအပါအဝင် အခြားသူများလည်း ဒုနဲ့ဒေးပင်ဖြစ်သည်။
ဤဆည်တည်ဆောက်ရန်စီမံကိန်း အတွက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေမှုများကပင် နောက်ကွယ်တွင် လျှို့ဝှက်မှုလည်း ရှိဟန်တူသည်။ ဆည်တည်ဆောက်ရန် အဆိုပြုချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ယနေ့ အချိန်ထိ ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုတစ်စုံတစ်ရာလည်းမရှိသေးပါ။ အလားတူပင် မည်သူက ဤအဆိုပြုမှုကို ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေသလဲဆိုတာလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါ။ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရလား သို့တည်းမဟုတ် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့ နက်ရှိုင်းသော ပတ်သက်ဆက်စပ်မှုရှိသော လူတစ်စုလား။ ပြည်သူလူထုအတွက် ကောင်းကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ မရှိပဲ လူနည်းစုတချို့ ကောင်းကျိုးအတွက် Nawi မြစ်ဝှမ်းကို အသုံးချသွားမည်လော ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်စိုးရိမ်မိပါသည်။
ထို့ကြောင့် Nawi ဆည်တည်ဆောက်မည့် အဆိုပြုချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးပါရန်နှင့် ဤစီမံကိန်း သည် ဟားခါးမြို့၏ အလှအပများကို ပျက်စီးစေနိုင်ကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးတောင်းဆိုအပ်ပါသည်။